Xildhibaan​ada Beesha Isaaq iyo siyaasiint​ooda Hargaysa oo ka dagaalamaa​ya in Professor Samatar loo magacaabo Ra?iisal-W​asaare | Subulaha News Network
You are here : Subulaha News Network » NEWS » Xildhibaan​ada Beesha Isaaq iyo siyaasiint​ooda Hargaysa oo ka dagaalamaa​ya in Professor Samatar loo magacaabo Ra?iisal-W​asaare
Xildhibaan​ada Beesha Isaaq iyo siyaasiint​ooda Hargaysa oo ka dagaalamaa​ya in Professor Samatar loo magacaabo Ra?iisal-W​asaare
Posted by admin on September 24th, 2012 05:47 PM | NEWS Dadka siyaasada u dhuun daloola ayaa la socda in hirdi weyn oo siyaasadeed Muqdisho ka jiro mudooyinkii ugu dambeeyay ee ay socdeen hawlihii lagu soo afjaraayay dawlidii ku meel gaarka ahayd ee wakhtigeedii dhamaaday. Hirdigaa siyaasadeed oo weli socdaa waa mid dibada soo dhigay siyaasado guracan oo beesha Isaaq ku soo bandhigtay Muqdisho balse raad ku yeelan doono siyaasadaha u dhexeeya beelaha Waqooyiga Somalia.
Waxaan ogsoonahay olalihii doorashada Madaxweynuhu intuu socda, beesha Isaaq ay gabi ahaanba la safteen Sheekh Shariif iyagoo ka baxay axdi ay la galeen Professor Samatar oo ay deggaan ka so wadajeedaan. Go?aanka xildhibaanada Isaaq wuxuu ka dambeeyay markii xukumada Silaanyo ergo saddex nin ah oo Duur (Wasiirka Gudaha S/L) hogaaminaayo qarsoodi ugu dirtay Muqdisho saddex maalmood ka hor doorashada Madaxweynaha Somalia. Ergadaasi waxay xildhibaanadii Isaaq ka dhaadhiciyeen in beesha Isaaq ina Samatar wax cod ah siin, waxayna arrinta u dhigeen in Dr Samatar khatar ku yahay danaha Isaaq isla markaana uu wiiqayo miisaanka Somaliland marka dib loo bilaabo wadahadalada ay Somalia la wadeen. Laakiin sobobta ay Professor Samatar ku diidan yihiin way ka gun dheertahay sidaas ay u dhigeen.
Waxaa cadaatay in Beesha Isaaq toos uga safato Dr Samatar oo ka soo jeeda Beesha Gadabuursi isagoo ah aqoonyahan midnimada Somalia ay mabda? u tahay. Kadib markii doorashadii madaxweynuhu ay dhamaantay waxa loo gudbay olalihii jagada Ra?iissalwasaraha oo dhextaal beesha Direed iyo Darood.
Shir ay isku yimaadeen beelaha Direed todobaadkan waxaa lagu go?aamiyey in beelaha Direed si wadajir ah ugu taageeraan Professor Samatar in loo magacaabo jagada Ra?iisal Wasaaraha. Waxayna isku raaceen in go?aankooda u gudbiyaan madaxweynaha Somalia. Haseyeeshee, go?aanka beesha Direed waxa si toos ah uga horyimid beesha Isaaq oo iskood toos ugu tagay Madaxweynaha kana dalbaday inuuna marnaba Profassor Samatar uu magacaabin Ra?iisal wasaare. Cidkale oo Dir ah xildhibaanada Isaaq may taageerin balse waxay Madaxweynaha u sheegeen oo kaliya in ay ka soo horjeedaan magacaabida Professor Samatar. Go?oankaa beesha Isaaq wuxu cadeynayaa in beeshaasi si cad u tageertay in Ra?iisal Wasaaruhu ka yimaado beelsha Daarood . Go?aankaa beesha Isaaq wuxuu daaha ka rogay cadaawada ay uu hayaan beesha Gadabuursi iyagoo iska dhaadhiciyay inuu Professor Samatar iyaga khatar ku yahay ugana roontahay inay taageeraan nin Darood ah halkii ay walaalkooda Waqooyiga ka soo jeeda ay taageeri lahaayeen.
Wadhaf NewsDadka siyaasada u dhuun daloola ayaa la socda in hirdi weyn oo siyaasadeed Muqdisho ka jiro mudooyinkii ugu dambeeyay ee ay socdeen hawlihii lagu soo afjaraayay dawlidii ku meel gaarka ahayd ee wakhtigeedii dhamaaday. Hirdigaa siyaasadeed oo weli socdaa waa mid dibada soo dhigay siyaasado guracan oo beesha Isaaq ku soo bandhigtay Muqdisho balse raad ku yeelan doono siyaasadaha u dhexeeya beelaha Waqooyiga Somalia.
« Damacbaa Dayaxa gubay “Madaxdhaqameedka iyo Wax-garadka Hargeysa oo ku ku doodaya Deegaamo aan ka tirsanayn hargaysa murana galinaya”
Telefishanka Qaranka iyo Idaacadda cusub oo Shiidaal la’aan u Damay habeen hore »